Raw Boldenone Cypionate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Boldenone cypionate powder isrogenic anabolic steroid inobva ku testosterone. Iine ine cypionate ester iyo inoita kusunungurwa kwakasimba kwechirwere muropa remavhiki e2. Izvi zvinogadzira boldenone cypionate powder steroid nyore kushandiswa nevatambi vakawanda nokuti haisi sekurwadziwa mushure mekuvhara. Izvo zvinoratidza chinhu ichi ndehurefu hwehutenderedzwa huri nguva yakareba kuitira kuti uwane zvinoonekwa uye zvakasvibiswa.
Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2) tsananguro
Boldenone Cyp inonzi androgenic anabolic steroid inobva ku testosterone. Iine ine cypionate ester iyo inoita kusunungurwa kwakasimba kwechirwere muropa remavhiki e2. Izvi zvinokonzera Raw Boldenone Cypionate powder iri nyore steroid kushandiswa nevatambi vakawanda nokuti haisi sekurwadziwa mushure mekuvhara. Izvo zvinoratidza chinhu ichi ndehurefu hwehutenderedzwa huri nguva yakareba kuitira kuti uwane zvinoonekwa uye zvakasvibiswa.
Boldenone inonzi anabolic androgenic steroid uye yakagadzirwa nemaitiro e testosterone yaive yakagadzirirwa kushandiswa kwemhuka. Inogona kuwedzera nitrogen kuchengetedza, protein synthesis, uye kudya, uye inokurudzira kusunungurwa kwe erythropoietin muitsvo. Boldenone Cyp, yakabva Boldenone, iyo ine mimwe yakafanana neBoldenone. Raw Boldenone Cypionate powder is ester ye boldenone uye inokurudzirwa seyo rubatsiro rwekurapa mabhiza anokonzerwa nehutachiona apo kuvandudzwa kwehuremu, shangu dzemvere kana hutano hunodiwa hunoda.
Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2) Specifications
Product Name Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2)
Kemikari Name 17β-hydroxy-androsta-1,4-dien-3-imwe cyclopentanepropionate
muchiso Name Boldenone Cyclopentanepropionate, Boldenone Cypionate powder
Kirasi yeMishonga Intermediates & Fine Chemicals; Pharmaceuticals; Steroids; boldenone
Molecular Wsere 398.58
ruvara Muchena kana kuti akabuda machena kana chiedza chekristalline powder
Skukodzera Inenge isingasviki mumvura, yakasvibiswa mumafuta ezviyo
Boldenone Cyp APane Kwekuvaka muviri uye kurapwa kwebhiza rakakosha.
Chii chinonzi Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2)?
Boldenone cypionate powder is ester ye boldenone. Esters inobva kune rimwe boka rehupenyu uye rimwe boka realkoxy rinotora nzvimbo imwechete hydroxyl kuti igadzire chigadzirwa chitsva. Munyaya iyi, boldenone cypionate powder inobva ku testosterone. Inotamba imwe yepamusoro yekubatana. Boldenone cypionate powder ishanduro yakashandurwa ye testosterone ine bhiri mbiri kune 1 uye 2. Izvi zvinoderedza kukwanisa kwaro kugadzira aromatize estrogen uye simba rayo anabolic. Iine phenylpropionic acid bond kune 17-beta hydroxyl. Boldenone cypionate powder is powder, zvakasiyana nezvimwe zvinhu hazvisi zvakanaka uye zvine chimiro chakanyanya kunowedzera kuoma uye kuva nyuchi.
Boldenone inonzi anabolic androgenic steroid inowanzoshandiswa mumamiriro ezvinhu ezvezvokurapa kupfuura mune zvehutano hwevanhu. Boldenone Cypionate powder, kufanana nezvimwe zvakagadzirwa anabolic androgenic steroid, yakagadzirirwa kutevedzera zvinokonzerwa ne testosterone. Inopa simba rekuvaka zvivako uye kugadzirwa kwepabonde.
Zvichienderana nemuti uye nyika iyo yakaitwa, inogona kuwanika mujw.org kana mazwi. Usati wasarudza chero chero chimiro che boldenone, ziva mutsauko pakati pavo. Iyi misiyano ichaonekwa kuburikidza neyo ester. Boldenones pipe powderate (nezvimwewo mafomu) muUnited States zvinongoratidzwa chete nezvekushandiswa kwemhuka.
Iyo Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2) mabasa
Iyo cypionate ester yakanga yakabatanidzwa neBoldenone zvikurukuru mabhii pasi pevhu muchiedza kupfupisa hafu yehupenyu kuti iwedzere kushanda kwakanaka kune vanogadzira muviri uye vatambi. Esters zvikamu zvakasanganiswa nemishonga inoshandiswa iyo inoshandura kuwedzerwa kwechirwere chechirwere ichocho sezvainopindira muropa. Zviratidzo zvakasiyana-siyana zvinodzora kukurumidza kana kuti zvishoma nezvishoma mishonga inobudiswa kana inobatwa nemuviri. Esters anewo simba guru pamusoro pehurefu hwenguva iyo mishonga inopa mabasa ayo mumuviri munguva.
Somuenzaniso, mamwe esters anobvumira kukurumidza kushandiswa kwechirwere mumuviri asi mhedzisiro haigari kwenguva refu. Vamwe vanononoka kusunungurwa kwechirwere mumutumbi kuitira kuti zvigone mazuva ekupedzisira kana masvondo, dzimwe nguva kwenguva refu. Kureba kwebasa rakapiwa nemishonga, yakadai seBoldenone cypionate powder inoyerwa muhafu yavo yeupenyu. Kuvaka muviri, hafu yeupenyu inokosha. Iyo yakareba hafu yehupenyu, majekiseni mashomanana kana zviyero zvinodiwa.
Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2) Dosage
Kutsvaga yakakodzera Boldenone cypionate dosage iyo inopa migumisiro inogona kuva yakaoma nokuti zvimwe zvakawanda zvinokonzerwa nemigumisiro iyoyo zvinofanira kutaridzirwa. Vamwe vashandisi vanoona kuchinja kwechipiri kana chechitatu vhiki. Zvimwe zvinotaura kuti dzinofanirwa kuzvishandisa kwemavhiki mana kusvika mashanu kuti zvive zvakanaka.
Mafungiro anongororwa anonzi 100 mg, vamwe vanoti chimwe chinhu chiduku, chakadai se50 mg. Izvo hazvizovi nehuwandu hwekuita kunze kwekuti iwedzerwa pane imwe maitiro e testosterone. Muumbi wekushandisa uchishandisa Boldenone cypionate powder anowanzokurudzirwa kuti akashandise muyero imwechete iyo munhu angashandisa testosterone cypionate powder nokuti inopa migumisiro yakafanana pamusoro pezvaanotarisira nehafu yeupenyu.
Madzimai anoshandisa Equipoise (Boldenone undecylenate) anowanzobatanidza mukati me200 mg kusvika ku400 mg vhiki imwe neimwe, kugovera dhigirii muzvikamu zviviri kana zvitatu kuti zvive nemigumisiro yakadai seyakatsamwa kweganda kana kurwadziwa kwepanyika panzvimbo yejojo. Zvinyorwa zvinoshandisa Boldenone cypionate kana chero mavara e boldenone , zvichienderana nemafungiro evanhu, vanogona kupedza chero kubva pamasvondo matanhatu kusvika ku12 kana kupfuura.
Raw Boldenone Cypionate powder (106505-90-2) Benefits
Boldenone Cypionate ishanduro yakasimba yeBoldenone Undecyclenate. Izvo zvakanyanya kupfuura simba rayo reUndecyclenate. Boldenone Cypionate ichakupa uwandu hwakaoma hwekudya pamapurotini anodya kudya pasina mvura yekuchengetedza mvura. Sezvo mvura inobhururuka isiri kuwedzera zvikuru kuhupamhi hwemutsipa, huwandu hwehukuru hwakawanikwa pahupenyu hweBoldenon Cypionate hunogona kuchengetwa mushure mekunge mishonga yaregwa.
tenga Boldenone Cypionate powder kubva kuBuasas.com